Ibaluleke kangakanani ifoto yakho yeProfayile ye-LinkedIn? | Martech Zone
Ibaluleke kangakanani ifoto yakho yeProfayile ye-LinkedIn?
NgoLwesibini, Januwari 11, 2022 NgoLwesibini, Januwari 11, 2022 Douglas Karr
Kwiminyaka eliqela eyadlulayo, ndaya kwinkomfa yezizwe ngezizwe kwaye babenesikhululo esizisebenzelayo apho unokuma khona kwaye ufumane iintloko ezimbalwa. Iziphumo bezimangalisa… ubukrelekrele obusemva kwekhamera bubangele ukuba ubeke intloko yakho kwindawo ekujoliswe kuyo, emva koko isibane silungelelaniswe ngokuzenzekelayo, kwaye i-boom… iifoto zathathwa. Ndaziva ngathi i-dang supermodel baphuma belungile ... kwaye ngoko nangoko ndazilayisha kuyo yonke iprofayile.
Kodwa kwakungenjalo ngempela mna. Andiyiyo i-supermodel. Ndingumfana odlamkileyo, okhohlakeleyo, kwaye owonwabileyo othanda ukuncuma, ukuhleka, nokufunda kwabanye. Kwadlula iinyanga ezimbalwa kwaye ndandisitya isidlo sangokuhlwa nentombi yam kunye nenkosikazi endandiyazi ukuba yahlala phantsi ukuze incokole nathi. Intombi yam… ongakwaziyo ukuvumela nayiphi na imeko ukuba ihambe ingakhange ifotwe… yafota ifoto yethu sisephakathi.
Ndiyayithanda le foto. Ndandifuna ukucheba iinwele, imvelaphi yayiyinkuni efudumeleyo, ukukhanya kwamkelekile, kwaye ndinxibe isikipa esicacileyo se-burgundy .. akukho suti okanye i-tie. Lo mfanekiso is mna. Ndifike ekhaya, ndayinqampula ndayibeka phezu kwam LinkedIn iprofayili.
Jonga kwaye uqhagamshelane noDouglas kwi-LinkedIn
Ewe, andingomsebenzi kwi-LinkedIn. Ndisisithethi, umbhali, umcebisi, kunye nomnini weshishini. Akukho veki idlulayo ndingadibanisi neqabane elinokubakho, umxhasi, okanye umsebenzi kwiLinkedIn. Andikwazi ukugxininisa ngokwaneleyo ukuba ifoto yeprofayile yakho ibaluleke kangakanani. Ngaphambi kokuba sidibane, ndifuna ukukubona, ndibone uncumo lwakho, kwaye ndijonge emehlweni akho. Ndifuna ukuziva ngathi unobuhlobo, ubuchwephesha, kwaye ungumntu obalaseleyo wokunxibelelana naye.
Ndingayifumana loo nto kwifoto? Ayiyiyo yonke… kodwa ndingafumana umbono wokuqala!
Ngaba uMfanekiso we-LinkedIn uyakuchaphazela ukuQeshwa kwakho?
Adam Grucela e Ipasipoti-Ifoto.kwi-intanethi uphendule lo mbuzo ubalulekileyo ngeengcebiso ezibalaseleyo ngezibalo ezixhasayo kule infographic. I-infographic ichukumisa imiba ebalulekileyo yefoto yeprofayile ye-LinkedIn… kubandakanya neempawu eziphezulu:
Charisma – yenza undwendwe ukuba akuthande kwaye akuthembe.
Ubugcisa -Lungisa umfanekiso kwi-niche yakho.
uphawu -layisha kuphela iifoto ezithathwe kakuhle.
isimo – wenze ukuba bakwazi ngcono.
Babonelela ngeengcebiso - njengokuqesha umfoti oqeqeshiweyo, usebenzisa umfanekiso okumgangatho ophezulu, uqinisekise ukuba ngowobuchule, sebenzisa ukuma okuhle kwaye ubonise umdla wakho. bakwabonelela ngeeflegi ezibomvu:
Musa ukusebenzisa ubuso obubonakala kancinci.
Musa ukusebenzisa ifoto enesisombululo esisezantsi.
Musa ukusebenzisa ifoto yeholide.
Ungasebenzisi umfanekiso ongeyonyani.
Musa ukusebenzisa ifoto yenkampani ngaphezu kweyomntu.
Musa ukuba ngaphezulu-the-top ekubeni nje eqhelekileyo.
Musa ukusebenzisa ifoto ngaphandle koncumo!
I-infographic ikuvumela ukuba wazi ukuba ifoto yakho ayiyonto yonke… ukwenza iprofayile yakho yonke ye-LinkedIn kubalulekile ekwandiseni amandla akho okunxibelelana kwaye uqeshwe. Qiniseka ukuba ufunda amanye amanqaku ethu kunye ne-infographics ehamba nayo, kubandakanya oku Isikhokelo esineenkcukacha malunga nokwenza iprofayile yakho ye-LinkedIn, kunye nezi zongezelelekileyo Iingcebiso zeprofayili ye-LinkedIn.
Kodwa Ndiyakucaphukela Ukuthatha Iifoto
Ndiyayifumana kodwa ifoto yeprofayile yakho hayi yeyakho! Ukuba awukuthandi ukufumana nokusebenzisa iifoto zakho, cela umhlobo wokwenene omthembileyo. Akukho nto ifana nokufumana umfoti kunye nomhlobo ukuba akukhuphe, ubambe iishoti ezimbalwa, emva koko uvumele umhlobo wakho omthembileyo ukuba akhethe ifoto oza kuyisebenzisa. Bayakwazi! Baza kukwazi ukuba yeyiphi eneneni eyenza umsebenzi omhle ekumeleni wena.
tags: douglas karrkwi-infographicLinkedInlinkedin headshotifoto ye-linkedinumfanekiso odibeneyoiprofayili edibeneyoUkufotowaifoto yeprofayileiingcebiso zefoto yeprofayile
Intengiso yeSelfowuni iBuyile kwiVogue-Ii-Brands ingazisebenzela njani kwaye ikhulise iiPhulo zabo zeselfowuni?
UNGAKHETHI: Izisombululo zokuSebenza kweDatha yokuThengisa kwi-Salesforce AppExchange